रवि ओड बने दोस्रो नेपाल आइडल | Ratopati
शनिबार २९ चैत, २०७६ Saturday, 11 April, 2020
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeपुस ६, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । निकै चासोका साथ हेरिएको सिजन–२ नेपाल आइडलको विजेता रवि भएका छन् । उनले २२ लाख र गोल्डेन माइक पाएका छन् ।
यो पटकको आइडल ‘फिनाले’ ललितपुरस्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको थियो ।
यस्तै विक्राम बराल फस्ट रनर अप भएका छन् भने सुमित पाठक दोस्रो संस्करणको नेपाल आइडलमा सेकेण्ड रनर अप भएका छन् । उनीहरुले क्रमशः २० लाख र १२ लाख बराबरको चेक पाएका छन् ।
त्यसैगरी दोस्रो संस्करणको नेपाल आइडलमा अस्मिता अधिकारी थर्ड रनर अफ भएकी छन् । उनले होन्डाको तर्फबाट स्कुटर पनि प्राप्त गरेकी छन् ।
अन्नपूर्ण नेटर्वकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, म्यानेजिङ डाइरेक्टर लक्ष्मी पौडेल, अन्नपूर्ण मिडिया नेटर्वकका ग्रुप सम्पादक विजयकुमार पाण्डे, नेपाल आइडलका निर्देशक सुरेश पौडेललगायतले उनीहरुलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
कोरोनाप्रभावित जिल्लामा ५ सय जनाको कोभिड–१९ परीक्षण, सबैको नतिजा नेगेटिभ
कोभिड–१९ महाव्याधिसँग जुघ्नका लागि भारतीय सहयोग जारी रहने !
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
लक डाउनको १८ औं दिनः राजधानीका सडक सुनसान
स्वास्थ्य उपकरण बोक्न ग्वानझाओ उड्न लागेको फ्लाइट अन्तिम समयमा स्थगित
सजिलै जितेको हैन ऊहानले कोभिड–१९ विरुद्धको महासंग्राम !